DOORASHADA GUDDOOMIYAHA FARACA YAAQSHIID – Hope Generation – جيل الأمل
DOORASHADA GUDDOOMIYAHA FARACA YAAQSHIID
Sanad ka hor maanta oo kale ayay ahayd markii la doortay guddoomiye Maxamed Axmed Cali (Maxamed Khadar Qadar Axmad), Kadib markuu dhamaaday Muddo xileedkii sanadka, sida uu sharcigu dhigayo waxaa maanta oo ay taariikhdu tahay 18/11/2016 ka dhacay Doorasho xor ah oo xalaal ah Hoolka Alqarni Cafeteria ee Degmadda Shibis.
Kadib tartan qurux badan oo ay ku tartamayeen dhalinyaro fara badan ayaa waxaa kusoo baxay doorashadii Guddoomiye Maxamed Axmed Cali (Maxamed Khadar), oo markale hoggaamin doona laanta Yaaqshiid muddo sanad ah.
Munaasabada waxaa goobjoog ka ahaa Guddoomiye ku xigeenaka JIILUL AMAL جيل الأمل – Hope Generation Maryan Garaad Axmed…. Maxada Xafiiska Wacyigalinta-Mudane Axhmed Sh Maxamuud … Guddoomiyaha Faraca heliwaa – Mudane Maxamed Clle Cabdi – ….. Guddoomiyaha Faraca Warta Nabadda -mudane Mustafa sh Ciise- … iyo xubnihii Faraca Yaaqshiid ee martida loo ahaa.
Munaasabadda ayaa kusoo idlaatay jawi dagan iyo farxad, waxayna ahayd munaasabad taariikhi ah. Waxaa halkan hambalyo diraya dhamaan Madaxda iyo Xubnaha Ururka JIILUL AMAL